Amaqembu we-whatsapp. ? Joyina Amaqembu E-whatsapp
Amaqembu we-whatsapp. Whatsapp Kuyinto isicelo esisetshenziswa kakhulu esisebenzisa maselula emhlabeni wonke, lokhu kuholele ezinkulungwaneni amaqembu e-whatsapp ukuthi abasebenzisi benzile bakwazi yenza abangane futhi ukhulume ezithombeni ezithile, izinketho noma izintshisakalo ezithile.
Sihlanganise amaqembu angcono kakhulu e-whatsapp ukuze abafundi bethu bajoyine amaqembu ezintshisekelo zabo.
Uzokuthola konke lokhu endaweni yesikhulumi AmaqembuWhatsapp.Online:
1 Amaqembu e-WhatsApp: Umhlahlandlela Ophelele
2 Yini amaqembu e-WhatsApp?
3 Ungawajoyina kanjani amaqembu e-WhatsApp?
4 Ama-whatsapp axhumanisa amaqembu
4.1 Yini izixhumanisi zamaqembu we-WhatsApp?
5 Ungawakha kanjani amaqembu e-WhatsApp?
6 Ungawuthulisa kanjani amaqembu we-WhatsApp?
7 Ungalishiya kanjani iqembu le-WhatsApp?
7.1 Ungalishiya yini iqembu le-WhatsApp ngaphandle kokubona?
8 Joyina Amaqembu E-WhatsApp
9 Dala isixhumanisi seqembu le-WhatsApp
Amaqembu e-WhatsApp: Umhlahlandlela Ophelele
Leli khasi Umhlahlandlela ophelele kumaqembu e-WhatsApp. Lapha uzofunda konke okudingeka wazi ujoyine amaqembu futhi ubambe iqhaza kuzo ubazi kahle. Futhi uzothola a Qedela uhlu ngamaqembu e-WhatsApp amahle kakhulu ongawajoyina, ihlukaniswe ngezindikimba. Uma ungafuni ukufunda lo mhlahlandlela ophelele futhi ufuna ukuqala ukupheqa uhlu lwethu, ungasesha.
Isitholi seqembu le-whatsapp
Yini amaqembu e-WhatsApp?
Amaqembu e-WhatsApp angamaqembu noma imuphi umsebenzisi wohlelo lokusebenza leselula le-WhatsApp angadala ukudala izingxoxo phakathi kwabangani noma abasebenzisi abahlukile endabeni ethile.
Sonke sinayo amaqembu ajwayelekile e-WhatsApp njengeqembu lomndeni, iqembu labangane abavela esikoleni, iqembu leqembu lebhola lezinyawo, noma iqembu lama-hangout ngempelasonto ... kodwa ngeWhatsApp ungakwazi dala amaqembu kuzo zonke izinhlobo zezihloko futhi vumela abasebenzisi abavela noma kuphi emhlabeni ukuthi bahlangane ukuze bahlangane nabantu, benze abangane futhi baxoxe ngendikimba yeqembu.
Ungawajoyina kanjani amaqembu e-WhatsApp?
Lapho umuntu dala iqembu le-whatsapp, engeza eqenjini abantu abakhethayo ohlwini lakhe loxhumana nabo afuna ukubamba iqhaza kulelo qembu. Kuze kube manje noma ubani angakungeza eqenjini elithile le-WhatsApp ngaphandle kokukucela imvume, kodwa Whatsapp Usuvele usebenza ukubuyekeza okusha lapho kuzodingeka wamukele isicelo ngaphambi kokungezwa eqenjini elithile. Lapho iqembu lenziwe, umphathi weqembu angabelana ngesixhumanisi sokufinyelela seqembu sabasebenzisi abasha ukujoyina lelo qembu. Kuleli khasi ungangena ekuxhumeni kwezinkulungwane zamaqembu ongawajoyina.
Ama-whatsapp axhumanisa amaqembu
Yini izixhumanisi zamaqembu we-WhatsApp?
Izixhumanisi noma izixhumanisi zamaqembu e-WhatsApp zi (njengoba ngike ngasho kuwe), izixhumanisi abaphathi ababelana ngazo ukuze abanye abantu bajoyine lelo qembu. Uma ungumlawuli we iqembu le-whatsapp ukuthi udale kuselula yakho, unga thola isixhumanisi kusuka kulelo qembu ukuze umeme abanye abantu ngezinyathelo ezilandelayo:
Faka iqembu olidalile.
Qhafaza "ukwabelana" phezulu.
Khetha inketho «Yabelana ngesixhumanisi» noma inketho «Kopisha isixhumanisi».
Ungawakha kanjani amaqembu e-WhatsApp?
Uma unesifiso dala iqembu le-whatsapp, ungakwenza ngokulandela izinyathelo ezingezansi:
Qhafaza "Dala iqembu" phezulu kohlelo lwakho lokusebenza lweWhatsapp.
Ngeza abahlanganyeli beqembu phakathi koxhumana nabo bese uqhafaza "ukulandela".
Faka igama leqembu nesithombe seqembu bese uqhafaza kulo "dala".
Lokhu kwenziwa, ungaba isixhumanisi noma isixhumanisi seqembu lakho le-WhatsApp ku AmaqembuWhatsapp.Online
Ungawuthulisa kanjani amaqembu we-WhatsApp?
Kwesinye isikhathi, umsindo wezaziso ze-WhatsApp ungacasula uma uthola njalo i-WhatsApp evela emaqenjini ehlukene. Lokhu kunesixazululo esilula kusukela lapho ukwazi khona Thulisa amaqembu akho e-WhatsApp. para thulisa iqembu le-whatsapp, kufanele u:
Faka iqembu le-WhatsApp ofuna ukulithulisa.
Khetha inketho "thula".
Khetha inketho phakathi kwesimungulu «8 amahora», «1 iviki» o "1 unyaka".
Enye indlela yokwenza thulisa iqembu Kunje:
Swayipha umunwe wakho phezu kweqembu ukuze ulisuse ngakwesokunxele.
Ungalishiya kanjani iqembu le-WhatsApp?
Shiya iqembu le-WhatsApp Kulula kakhulu. Kumele nje:
Qhafaza "Shiya iqembu".
Ungalishiya yini iqembu le-WhatsApp ngaphandle kokubona?
Uma ufuna ukushiya iqembu le-WhatsApp ngaphandle kokuthi abanye ababambe iqhaza eqenjini babone, ngiyaxolisa ukukutshela ukuthi ayikho inketho enjalo okwamanje. Lapho ushiya iqembu, okuseleyo uthola umyalezo kulelo qembu wazisa ukuthi ushiye iqembu.
Joyina amaqembu eWhatsapp epulatifomu yethu Kulula kakhulu.
Kumele udlulise amehlo kusesho phakathi Amaqembu e-WhatsApp ashicilelwe, futhi lapho uthola iqembu ofuna ukulijoyina, chofoza kulo "Isixhumanisi seqembu". Uzoqondiswa ngqo kuWhatsapp futhi uzocelwa ukuthi uqinisekise ukuthi ufuna ukujoyina leli qembu.
[Joyina Amaqembu E-whatsapp]
Dala isixhumanisi seqembu le-WhatsApp
Uma ungakayitholi iqembu le-whatsapp oyifunayo, ngikumema ukuthi uzenzele ngokwakho bese wabelana ngakho epulatifini yethu ukuze ababambe iqhaza abasha bangangezwe. Manje usungakwenza dala iqembu le-WhatsApp futhi ulishicilele.